नेपाल लाईफ इन्स्योरेन्स लहान शाखाबाटै साह दम्पतिको रकम गायब
प्रकाशित मितिः बैशाख १९, २०७६
सिरहा, १९ वैशाख । सिरहाको लहान नगरपालिका बस्ने दिनेश साह र उनकी श्रीमति सुनैनादेवी साहको नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लहान शाखाबाट रकम गायब भएको छ । लहान नगरपालिका वडा नं. १ का दिनेश साह र उनकी श्रीमती सैनुनादेवी साह नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको जीवन सहारा र जीवन ज्योति बीमा लगायत विभिन्न पोलीसीमा दस वर्षदेखि ५३ लाख रुपैयाँको बीमा गराएका थिए । त्यो बीमा पैसाले छोराछोरीलाई राम्रो शिक्षा दिलाउन र विहेवारी पनि राम्रैसँग तामझामकासाथ गर्ने सपना मनमा सजाएका थिए । तर ती सारा सपना यतिबेला चकनाचुर भएको छ । बीमा कम्पनीबाट ठगिएका छन् । परिवारको सपनामाथि तुसारापात भएका छन् । सिंगै परिवार चिन्तामा परेका छन् । दिनेश साहको नाममा करिब ३१ लाख ९७ हजार २९७ र सैनुनादेवी साहको नाममा करिब २१ लाख ६८ हजार ८४० गरी जम्मा ५३ लाख ६६ हजार १३७ रुपैयाँ इन्स्योरेन्समा जम्मा गरेका थिए । तर दुबै जनाको नाममा जम्मा रहेको बीमा रकमबाट पाँच वर्षदेखि विभिन्न गते मितिमा पटक– पटक गरी २१ लाख ३० हजार ऋण निकालि सकेको छ । जसको ब्याज १० लाख ८१ हजार ३२५ भइसकेको छ । ऋण र ब्याज गरी उनको नाममा ३२ लाख ११ हजार ३ सय २५ रुपैयाँ भइसकेको छ । पिडित दिने साहका अनुसार ‘आफू एक पैसा ऋण लिएको छैन् । घरमा थोरै समस्या पर्यो फाइल बोकेर ऋण लिन अफिस पुगेपछि ऋण निकालेको थाहा पाएपछि आश्यर्च लाग्यो । आकाशबाट झरेझैं भयो ।’ ‘बीमा अफिसमा निवेदन हालेको ३÷४ हप्ता भइसक्यो’, ‘तर अहिलेसम्म कुनै सुनवाइ भएको छैन् ।’ अफिसले ऋण कसले निकालेको विषयमा छानविन गर्छु भनेपनि केहि नगरेको उनको गुनासो छ । एनएलआईसी ठगी गर्ने बीमा कम्पनी भएको भन्दै उनले कसैलाई त्यसमा बीमा नगर्न आग्रह समेत गरे । पाँच वर्षदेखि पटक–पटक आफ्नो नाममा ऋण निकाल्दा पनि कम्पनीले थाहा नपाउनुले कर्मचारीहरुमाथि नै शंका उनले गरेका छन् । अरु बेला मोबाइलमा म्यासेज र खबर आउँथ्यो तर ऋण निकाल्दा किन एसएमएस आएन ? उनको प्रश्न छ । यसरी ठगीमा परेपछि उनको परिवारको सपनामाथि तुसारापात भएको छ । विभिन्न व्यक्तिले मलाई नेपाल लाइफ धेरै ठूलो कम्पनी हो तर तिमि सानो मानिस तिमिलाई बिमा कम्पनीले पैसा नदिएपनि तिमि केही गर्न सक्दैनौ पिडित साहले बताए । यस विषयमा प्रतिकृया लिनखोज्दा प्रतिक्रिया दिन मानेनन् र भने माथिल्लो निकायबाट प्रेसर आउछ र मेरो नोकरीमापनि असर पर्छ भन्दै नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लहान शाखाका ब्रान्च म्यानेजर भोगेन्द्र साहले भन्दै पन्छिए ।
राज्य मन्त्रीले खेल मैदानमा रोपिएका विरुवा
सिराहा,भाद्र २४ गते । सिरहाको सूर्य नारायण सत्य नारायण यादब बहुमुखि क्याम्पस सिरहाको खेल मैदानमा निजामती दिवसको अवसर पारेर प्रदेश नं. २ को उधोग, पर्यटन, वन तथा वातावरण राज्य मन्त्री सुरेश कुमार मंडलको प्रमुख अथितियमा रोपिएका विरुवाका कारण जिल्ला लिगका तयारीमा रहेका खेलाडीहरुका मै
सिरहा ः नियमित पठनपाठनको माग गर्दा वडाध्यक
सिरहा । नियमित पठनपाठनको नभएको भन्दै विद्यालय र वडा कार्यालयमा तालाबन्दी गरेका सिरहाको एक सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीहरु वडाध्यक्षकै निर्देशनमा कुटिएका छन् । सिरहाको कल्याणपुर नगरपालिका–४ स्थित रहेको श्रीमावि विष्णुपुर डडौलका विद्यार्थीमाथि आईतबार वडाध्यक्षकै निर्देशनमा
पूर्ण सरसफाई तथा खानेपानी स्वच्छता व्यवस्थ
सिराहा । सिरहा जिल्लाको सबभन्दा बढी बाढीबाट प्रभावित स्थानियतह सिरहा, कल्याणपुर र कर्जन्हा नगरपालिकाले बि.एम.जेड., भि.सि.ए., डबलु.एच. एच.का साझेदारीमा र सबल नेपाल, सप्तरीको आयोजनामा गरिएकोे दुई दिने पूर्ण सरसफाई तथा खानेपानी स्वच्छता व्यवस्थापन विकास योजना विषयका कार्यशाला गोष्ठि
एक बैंकको एटीएम कार्ड अर्को बैंकमा
एनसेल प्रकरणमा ६ न्यायाधीशको जागिर
अबको विकल्प डा.सीके राउत र जनमत पार
एटिएम लुट प्रकरण: चिनियाँ दुतावासले
नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीबीच भिड
हाैसला र उत्साह लिएर भदौ २४ गतेदेखि
प्रदेश २ सरकारका मन्त्री रायको राजी
३० वस्तुगत प्रश्नोत्तर